एक सानो र रहस्यमय दरार एक सानो शहर सेटिंग मा खोलिएको छ। के तपाईले यो स्लट मिसिन स्पिन गर्ने हिम्मत गर्नु अर्को पक्षमा के के छ? रिफ्ट नयाँ खेल हो थन्डरकिक जो एक अद्वितीय विषय को केहि विशेष gameplay सुविधाहरु संग कार्य गर्दछ। त्यहाँ 5-reels, 17 paylines र सबै प्रकारका अजीब र अचम्मका प्रतीकहरू छन् यो स्पकुकी स्लट मिसिनमा खोज्न। त्यसोभए यदि तपाईं उस्तै पुरानो कताईएको क्रियाकलापको ऊब हुनुहुन्छ, त्यसोभए तपाईं अलि अचम्म रफ्ट स्पिनहरू, चिपचिपा जंगली र गाढा मोडको साथ निःशुल्क स्पिन्ड मनपर्छ।
अर्को संसारमा पोर्टल ...
क्या तपाईं केवल यो नफरत नगर्दा जब केहि पनीर चलाउछ र अंडरवर्ल्डमा पोर्टल खोल्छ? खैर, त्यो वास्तवमा के रिफ्टमा भएको छ, केही मूर्ख चलेको छ र एक निद्रा गाँउको cobbled सड़कों मा चर्च को पक्ष मा एक ठूलो सा्यानेनिक पेन्टाग्राम बनाइएको छ। अब, सबै प्रकार को अजीब सामान शुरु हुने छ, वरपर चारै ओर अजीब प्रतीकहरु को एक श्रृंखला को आसपास को आसपास, जस्तै अन्य डरावनी को सिक्का, एक शल्य चिकित्सा, एक ओटोपस लटकन, एक स्टडवुड र एक जलन किताब। साँच्चै सबै अजीब साँच्चै, र रहस्य टुक्रा गर्न एकमात्र तरिका रिलिन स्पिन र यो के हुन्छ जब यी आइकनहरू पङ्क्तिहरू मिलाएर के हुन्छ?
दरार अपडेट गरिएको: जनवरी 16, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.3 हीरा घाटी
2.0.0.4 मीठा 27
2.0.0.6 वारलर: शक्तिको क्रिस्टल
2.0.0.7 ग्लैमर जीवन
2.0.0.8 गोप्य सांता